भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: हिमाल हेर्ने मन !
हिमाल हेर्ने मन !
एकै दिन ५ दर्जन भन्दा बढी सगरमाथा चढेको सुनेपछी लाग्यो धेरै नेपालीहरु पनि हिमालसँग हिमचिम बढाउन थालेका छन । विश्वको अग्लो चुचुरो चुमेर केही समय अघी समाबेशी महिला टोली फिर्ता भएपछी त हिमाल टाढाको बिषय रहेन , यो त राजनीति जस्तै चियाको गफमा समेत चर्चा हुनथालेको छ ।
तर लाङ्टाङ हिमाल कुन सिजनमा जाने हो , त्यो बुझ्यो भने तपाईं पनि सिधै हिमाल छेउमा उभिन बेर छैन ! नत्र बादल लागेको मौसम र छेकिने पहाडहरुले तपाईंलाई हिउदेखी टाढै-टाढै राख्न खोज्छन नि !
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:17 AM
लाङ्टाङ सर्किटको थकाई बिर्सदै !
हरियो बेसीमा !
बादलमा लुक्दै केन्जिङ गाउ !
फेरी लाङ्टाङको होहल्ला नै !
भेडाको उनजस्तो !
खै बाटो : खोलाले बगायो !!!
सदरमुकामको बाटो बन्द हुनसक्ने !